Posted by ukkmaung on February 23, 2014 at 4:53pm
ဒီဆုံးမခန်းလေးကို မသွားခင် အတိတ်အကြောင်းလေးကုို နည်းနည်းလောက် ပြန်ပြောင်း ကြည့်လုိုက်ရအောင်ပါ၊ တကယ်တော့ ရှင်ရာဟုလာလေး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ တွေ့ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ သားရတနာလေးဖြစ်လာရတာဟာ သူ့မိခင် ယသောဓရာရဲ့ စနစ်တကျစီမံမှုလုို့ ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတုိုင်း ရာဟုလာလေးကို မယ်တော်ယသောဓရာရဲ့ ဖခမည်းတော်ဘုရားထံ အမွေတောင်းခံဖုို့ စေလွှတ်မှုကနေတဆင့် ၇-နှစ်သား ရာဟုလာလေးဟာ ကိုရင် ကလေး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားရမှာက ယသောဓရာဟာ အလောင်းတော် ပစ်ခွါသွားပေမယ့် သူက အလောင်းတော်နဲ့ အတူနေခဲ့တဲ့ ကပိလဝတ်နန်းတော်ကို သူ မပစ်ခွါနုိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် တစ်ခုလပ်ဖြစ်ရတဲ့ ယသောဓရာလေးကို အတုိုင်းတုိုင်း အပြည်ပြည်က ဘုရင်တွေ၊ မင်းညီမင်းသားတွေက ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ အခါမှာ လှည့်လုို့ပင် မကြည့်ခဲ့၊ အားလုံးကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါဟာ ဘုရားအလောင်းတော်အပေါ်မှာ ထားရှိခဲ့တဲ့ သူရဲ့ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ သံယောဇဉ်ကြောင့်ပါ၊
တနည်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်အတွက်တော့ ယသောဓရာဟာ ကပ်ငြိမှု အလျင်းမရှိတော့တဲ့ ကောင်ကင်ကြီးကို တဘက်သတ် တွယ်ငြိမ်နေတဲ့ ကြိုးမျှင်လေး တစ်ချောင်းလိုပါပဲ...သို့ပေမယ့် ထိုကြိုးက ချည်နှောင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ကြိုးမဟုတ်ပါဘူး... စေတနာနဲ့ ကျစ်တဲ့ ကြိုး... ပေးဆပ်မှုသက်သက်ဖြင့် ရစ်ပတ်တဲ့ ကြိုး... တွယ်ငြိနေကာမျှဖြင့် နှစ်သိမ့်နိုင်တဲ့...ကြိုး...။
သူမဟာ ဘုရင့် သမီးတော်၊ ဘုရင့်ချွေးမတော် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရွှေလည်း မရှား၊ ငွေလည်း မရှားပါ၊ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ထံက အမွေတောင်းခုိုင်းတယ်ဆုိုတာက မွေးကတည်းက ဖခင်နဲ့ စကားတီတာ မပြောခဲ့ရရှာတဲ့၊ အတူတကွ တစ်ရက်ကလေးတောင် မနေခဲ့ရရှာတဲ့ သားလေးကို သူ့ဖခင်နဲ့ အနီးကပ်တွေ့စေချင်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးးလေးဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒက ရှေ့တန်းကပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကလေးကို ပိုမုိုပေါ်လွင်စေဖုို့ ဥပမာလေးတစ်ခု ထုတ်ရရင်တော့ ... မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဘုရားဖြစ်လုို့ တစ်ဝါရတော့မှ ကပိလဝတ်ရွှေနန်းတော်ကို ပြန်လည်ကြွဝင်တော်မူပါတယ်၊ (ရွှေနန်းတော်က ထွက်ခွါခဲ့တာ ၇-နှစ်နှစ်တိတိကြာခဲ့ပြီပေါ့...။)
ထုိုသို့ကြွဝင်တော်မူလို့ ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာမှ ယသောဓရာဟာ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြှော်နုိုင်ပါတယ်၊ တစ်တုိုင်းပြည်လုံး အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ်နဲ့ ၇-နှစ်တာလုံး ကွဲကွာနေတဲ့ ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြှော်ကြ၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြောဆုိုကြ၊ ချီးကျူးကြနဲ့ အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြချိန်မှာ သူလည်း အများနည်းတူ၊ ဘုရားရှင်ကို အလွန်ပဲ တွေ့ချင် မြင်ချင်လှပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူသွားမတွေ့ပါဘူး။
သူ့စိတ်ထဲက တွေးပါတယ်၊ * မောင်တော်ဘုရားအပေါ်မှာ နှမတော် ဘယ်လောက် တန်ဘိုး ထားတယ်၊ ဘယ်လောက် မြတ်နုိုးတယ်၊ မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်မှ မထားပဲ ပေးဆပ်မှုတွေပဲ ရှိခဲ့တယ်ဆုိုတာ မောင်တော်ဘုရား အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ၊ ဒီကျေးဇူးတွေကို အသိမှတ်ပြုတယ်ဆုိုရင် မောင်တော်ဘုရားကိုယ်တုိုင် နှမတော်ထံကို အဖူးမြှော်ခံဖုို့ ကြွရောက်လာပါလိမ့်မယ်...*
ဘုရားရှင်ထံကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ကြဖုို့ တုိုက်တွန်းကြသူတွေ အားလုံးကိုလည်း သူဒီလုိုပဲ ပြောလုိုက်ပါတယ်၊ ဒါဟာ ယသောဓရာရဲ့ လက်ကျန်မာနလေးလုို့ ပြောလုို့ရပေမယ့် ဘုရားရှင်ကို မင်းပရိတ်သတ် အလယ်မှာ ထွက်ပြီး မတွေ့ရခြင်းရဲ့ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒါကတော့ သူဟာ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားကို တစ်သံသရာလုံးမှာ တစ်ယောက်တည်း ဆုိုသလုို ပေးဆပ်ပြီး ချစ်လာခဲ့တာပါ၊ ယခုတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းဟာ သံယောဇဉ်လက်ကျန်နဲ့ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံရခြင်းဆုိုတာလည်း သူရိပ်မိနေပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ သူသိပ်ကို လွမ်းနေရသလုို၊ အလွန်လည်း ဝမ်းနည်းနေပါတယ်၊ ဘုရားရှင်ကို တွေ့မြင်ရရင် သူဟာ လူပုံအလယ်မှာ မည်သုို့မြည်ပုံ ဖြစ်မယ်ဆုိုတာ သူလည်း မခန့်မှန်းနုိုင်ပါဘူး၊ မင်းပရိတ်သတ်ရဲ့ အလယ်မှာ သတိလက်လွတ် ငှက်တောင်ကျွတ်ဆုိုသလုို သူဖြစ်ခဲ့ရင် ဘုရားရှင်က နားလည်နုိုင်ပေမယ့် မင်းပရိတ်သတ်တုို့ရဲ့ အလယ်မှာ သူ့သိက္ခာကျဆင်းရမယ့် အရေးကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်၊ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ကို အားရပါးရ ဖူးမြှော်ချင်လုို့ မရမနေ တွေ့ချင်နေပေမယ့် သူမ သည်းခံစောင့်စည်းခဲ့တာပါ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း ယသောဓရာရဲ့ ထုိုစကားကို အပျိုရံတွေထံက တစ်ဆင့်ကြားတယ် ဆုိုရင်ပဲ သုဒ္ဓါဓနမင်းကြီးကို အပါခေါ်လုို့ မင်းသမီးရဲ့ နန်းဆောင်တုိုက်ခန်းကို ကြွမြန်းတော် မူပါတယ်...။
ယသောဓရာမင်းသမီးဟာ ဘုရားရှင်ကြွလာမယ်ဆုိုကတည်းက နေရာထုိုင်ခင်းတွေ ခင်းကျင်းထား ပေမယ့် ဘုရားရှင်ကို ရွှေနန်းဆောင်တုိုက်ခန်းဝမှာ တွေ့ရတယ်ဆုိုရင်ပဲ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ရွှေခြေဖမုိုးအစုံမှာ မျက်နှာကိုအပ်လုို့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငုိုကျွေးပါတော့တယ်၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ခြေတော်အစုံကို သူ့ဆံနွယ်များနဲ့ ပွတ်သပ်သုတ်သင်လုို့ ၊ ဖုန်မှုန့်များလိမ်းကြံနေတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ခြေတော်အစုံကို မျက်ရည်မုိုးနဲ့ ဆေးကြောလုို့၊ နှုတ်ကလည်း ဝမ်းနည်းစကားများ အဆက်မပြတ်ပြောကြားရင် ဝမ်းပန်းတနည်းရှိုက်ကြီးတငင်ကို ငုိုကျွေးရှာပါ။
မြတ်စွာဘုရားက နားလည်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်၊ ဒါဟာ ဘဝပေါင်းများစွာ၊ ကမ္ဘာပေါင်းများစွာ တကည်းက ရစ်ဖွဲ့စီးဆင်းလာခဲ့တဲ့ မေတ္တာမုိုးတွေ မဟုတ်ပါလား၊ တစ်ဘဝမဟုတ်၊ နှစ်နှစ်ဘဝ မဟုတ် ၊ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးက ဖြည့်ဆည်းပေးလာခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး ပါရမီဖြည့်ဖက်ရဲ့ မျက်ဝန်းက ရွာသွန်းတဲ့ နောက်ဆုံးမျက်ရည်မုိုးတွေ မဟုတ်ပါလား။
ယသောဓရာမင်းသမီး ငိုကျွေးလုို့အားရတော့မှ မြတ်စွာဘုရားက ခင်းထားတဲ့ နေရာမှာ ထုိုင်ရင်း ယသောဓရာမင်းသမီးကို ရွှေမျက်လွှာတော် အသာလှပ်လုို့ ကြည့်ရှုတော်မူပါတယ်၊ ယသောဓရာမင်းသမီးရဲ့ အသွင်က ယခင်နဲ့မတူတောပြီ၊ ဖီးလိမ်းသုတ်သင် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိတော့ပြီ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အမျိုးသမီးများ တန်ဖုိုးတထား ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ တန်ဆာတွေလည်း သူမ မဝတ်ဆင်တော့ပြီ၊ ဒီဇမ္ဗူမှာ မည်သူနဲ့မျှ မတူအောင် လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကလည်း အလိမ်းအခြယ်ကင်းလုို့ ညှိုးနွမ်းနေခဲ့ပြီ...။
ဖခမည်းတော်ရဲ့ စကား ဘုရားရှင်ရဲ့ နားထဲမှာ ကြားရတဲ့ အချိန်မှာ သာမာန်ပုထုဇဉ်များဆုိုရင်တော့ စိတ်ဓါတ်တုန့်လှုပ်စရာကောင်းလှပါတယ်...
* သားတော် ဘုရား၊ သားတော်ဟာ နန်းတော်ကထွက်ခွါလုို့ ဆံပင်မှုတ်ဆိတ်ကို ပယ်ပြီလုို့ ကြားခတည်းက ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ သမီးလိမ္မာလေးကလည်း အမျိုးသမီးတုို့ တန်ဖုိုးထားအပ်တဲ့ ကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သူ့ဆံပင်ကို ဖီးလိမ်း သုတ်သင် အလှပြင်ဆင်မှု မရှိတော့ဘူး...။
* သားတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရားဟာ လူသာမာန်တုို့ ဝတ်ဆင်အပ်တဲ့ ကြောင်ကြောင်ကြားကြား အဝတ်အစားများကို စွန့်ပယ်ပြီဆုိုကတည်းက ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သမီးအလိမ္မာလေးကလည်း ကောလိယတုိုင်းဖြစ် ပုိုးထည်အဝတ်တုို့ကို စွန့်ပယ်လုို့ ယောဂီအဝတ်ကလေးနဲ့ပဲ တင်းတိမ် ခဲ့ရှာပါတယ်..။
* သားတော် ဘုရား၊ သားတော်ဘုရားဟာ တစ်နေ့ကို ထမင်းတစ်နပ်ပဲ စားတော့တယ် ကြားကတည်းက ဘုရားတပည့်တ်ာရဲ့ သမီးအလိမ္မာလေးဟာလည်း ချစ်သားဘုရားနဲ့ အတုလုိုက်လို့ တစ်နေ့ကို တစ်နပ်ပဲ စားခဲ့ပါတယ်...။
* သားတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရားဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အိပ်ယာကုတင်ကို စွန့်ပယ်ပြီဆုိုကတည်းက ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ သမီးအလိမ္မာလေးဟာလည်း နုညက်ချောမွေ့တဲ့ မွေ့ယာကုတင်ကို စွန့်ပယ်လုို့ ကြမ်းပြင်မှာ ဖျာကြမ်းကလေးနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်...။
* သြော်...စွန့်နုိုင်ရက်သူက အဝေးဆုံးကို ပြေးထွက်ခွါတိမ်း စိမ်းသွားရက်ခဲ့ပေမယ့်... မစွန့်ခွါနုိုင်သူကတော့ လူချင်းမနီးပေမယ့် စိတ်ချင်းများနီးလေမလား... ကိုယ်ချင်း မနီးနုိုင်ပေမယ့် အတွေးချင်းများ နီးလေမလားဆုိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့... ရယူခြင်းမပါ ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ ချစ်ပြနေခဲ့တာပါလား...။
ယသောဓရာဟာ သူအမြတ်နုိုးဆုံး ၊ တစ်သံသရာလုံးမှာ အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သူ့မောင်တော် သိဒ္ဓတ္ထကုို သူစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ သူ့မောင်တော်ထံက အခြားဘာမှ မျှော်လင့်ချက် မထားဘူးဆုိုတာ သိသာလှပါတယ်။
ဆုိုခဲ့ပြီးတဲ့ အတုိုင်း သားတော်ကလေးကို အမွေတောင်းလွှတ်တာကတော့ မွေးကတည်းက ဖခင်ကို မတွေ့ခဲ့ရရှာတဲ့ ဖတဆုိုးသားလေးကို သူ့ဖခင်နဲ့ တရင်းတနီးတွေ့စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တနည်းပြောရမယ်ဆုိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားက သံယောဇဉ်အမျှင်ပြတ်ခဲ့ပေမယ့် သူမပြတ်နုိုင် သေးပါဘူး၊ မည်သုို့မည်ပုံ ဆံဆက်ပုံမျိုးနဲ့မဆုို ဘုရားရှင်နဲ့ သူ ဆက်စပ်နေချင်ပါသေးတယ်၊ ဒါကြောင့် သူ့အသက်လောက်ချစ်ရတဲ့ သားလေးကို ဘုရားရှင်ထံ ပုို့လွှတ်ခဲ့တာပါ။
ရာဟုလာလေး ရွှေနန်းတော်ကို ပြန်မလာတော့တဲ့ အခါမှာလည်း ဘုရင်သုဒ္ဓါဓနမင်းကြီးက ဆောက်တည်ရာမဲ့ ဘုရားရှင်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့် ယသောဓရာကတော့ တည်ငြိမ်စွာပဲ ရင်ဆုိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ သူ စိတ်ချတယ်လေ၊ အငြိမ်းချမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ သူ့ဖခင်ထံမှာ သူ့သားလေး ငြိမ်းအေးနေမယ်၊ ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆုိုတာ သူအသိဆုံးမုို့ပါ၊ ဒါဟာ သူ့မှာ ရှိသမျှအရာတွေထဲက အမြတ်နုိုးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပေးဆပ်မှုပဲ မဟုတ်ပါလား...။
တောကျောင်းပြဿာဒ်ကလေးက ဘုရားရှင်နဲ့ ရဟုလာလေးရဲ့ နှစ်ပါးတည်း ကျင်းပတဲ့ တရားပွဲလေးကို ပြန်သွားပြီး ကြည်ညိုလုိုက်ကြရအောင်...။
မိခင်ရင်ခွင်က စွန့်ခွါလုို့ ဖခင်ရင်ခွင်ကို ခုိုဝင်လာတဲ့ သားတော်လေးကို မြတ်စွာဘုရားက အမှုမဲ့ထားတော်မမူပါဘူး၊ ကလေးလေးဆုိုတော့ အမှားတွေ မလုပ်မိအောင်၊ အမှားတွေ မပြောမိအောင်၊ အမှားတွေ မတွေးမိအောင် အမြဲပဲသွန်သင်ဆုံးမတော်မူပါတယ်...။
ဘုရားရှင်က သတ္တဝါတွေကို ဆုံးမတဲ့အခါမှာ လုိုအပ်ရင် လုိုအပ်သလုို ကြားခံ အရာဝတ္ထုလေးတွေသုံးပြီး ဆုံးမူလေ့ရှိပါတယ်၊ ရှင်စူလပန် ဝတ္ထုမှာဆုိုရင် မြတ်စွာဘုရားက လက်ကိုင်ပဝါ အဖြူလေးကို အသုံးပြုပြီးဆုံးမတော်မူပါတယ်၊ ထုိုဇာတ်တော်မှာလည်း သာမာန်လက်ကိုင်ပဝါလေးတစ်ထည်ဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ လက်ထဲမှာတော့ အရဟတ္တဖုိုလ်ကို ကျေးဇူးပြုနုိုင်တဲ့အထိ တန်ဖုိုးကြီးတဲ့ လက်ကုိုင်ပဝါလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရှင်သာရိပုတြာ ကမ္မဋ္ဌားန်း အပေးမှားလုို့ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ရွှေပန်းတိမ်သည်ရဲ့ သား ဇာတ်တော်မှာဆုိုရင် မြတ်စွာဘုရားက ပန်းပွင့်ကလေးတစ်ပွင့်ကို အသုံးပြုပြီး ဆုံးမတော်မူပါတယ်၊ လူသာမာန်တုို့အတွက် တပ်မက်စရာထုိုပန်းပွင့်ကလေးဟာလည်း ဘုရားရှင်ရဲ့ အသုံးပြုမှု အောက်မှာတော့ ကိလေသာတွေကို ကုန်ခမ်းစေတဲ့ ရဟတ္တဖုိုလ်ပေါက် ပန်းပွင့်လေး တစ်ပွင့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်၊ အမြတ်ဆုံးပန်းကလေးပေါ့။
ရှင်ရာဟုလေးလေးကို ဆုံးမရာမှာလည်း မြတ်စွာဘုရားက ကြားခံအရာဝတ္ထုလေးတွေ သုံးပြီး ၇-နှစ်သားကလေး နားလည်နုိုင်အောင် ဆုံးမတော်မူပါတယ်။ ပထမဆုံး မြတ်စွာဘုရားက ရှင်ရာဟုလာလေးကို အုန်းမှုတ်ခွက်ကလေးကို မှောက်လုိုက်၊ လှန်လုိုက်နဲ့ လိမ်ညာမပြောဖုို့ ဆုံးမပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မြတ်စွာဘုရားက မှန်ကလေးတစ်ချပ်ကို ဖန်ဆင်းလုိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ရာဟုလာလေးကို ပြပါတယ်၊
* ချစ်သားရာဟုလာ၊ ဒီမှန်စကလေးကို တွေ့ရဲ့ လား၊
* မှန်ပါ့၊ တွေ့ပါတယ် ဘုရား၊
*တွေ့တယ်ဆုိုရင်၊ မှန်ဆုိုတာ ဘာလုပ်ဖုို့အတွက်လဲ ချစ်သား
အခြားသူတွေ ဆုိုရင်တော့ မှန်ဆုိုတာ ကြည့်ဖုို့လုို့ ဖြေနုိုင်ပါတယ်၊ သို့ပေမယ့် ၇-နှစ်သား ရှင်ရာဟုလာလေးကတော့ ဒီလိုမဖြေပါဘူး
* မှန်ဆုိုတာ ကိုယ့်မျက်နှာကို စစ်ဆေးဖုို့ဖြစ်ပါတယ် ၊မြတ်စွာဘုရား၊
* မှန်ပေတယ် ချစ်သား၊ အဲဒီလုိုပဲ ချစ်သားဟာ မိမိကိုယ်ကုိုယ်ကို အမြဲစစ်ဆေးနေရမယ်၊ သတိလက်လွတ် ဘယ်တော့မှ မနေရဘူး၊ သတိလက်လွတ်မတွေးရဘူး၊ သတိလက်လွတ် မပြောရဘူး၊ ဘာကုိုမှ သတိလက်လွတ် မလုပ်ရဘူး၊ တွေးကြံ၊ ပြောဆုို ၊ လုပ်ကုိုင်တုိုင်းမှာ သတိနဲ့ အမြဲယဉ်တဲ့ စိတ်ရှိရမယ်...။
ရှင်ရာဟုလာလေးဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေကြောင့် အသိတရားအခြေခံလေး ရနေပါပြီ၊ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဒီလောက် အဆုံးအမလေးကပဲ ရှင်ရာဟုလာလေးကို ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမုအရာ၊ စိတ်အမှုအရာ နူးညံ့သိမ်မွှေ့တဲ့ ချစ်စဖွယ် ကိုရင်ငယ်ကလေးဖြစ်စေခဲ့တာပါ။
သာဓက တစ်ခုပြရရင် တခါက ရဟန်းတော်တွေဟာ မနက်စောစော ကျောင်းဝန်းထဲမှာ တံမြက်စည်းလှည်းကြရင် ကိုရင်ကလေးရာဟုလာလာတာ မြင်တော့ စမ်းသပ်ချင်တာနဲ့ပဲ အမှိုက်တွေကို လမ်းပေါ်မှာ ဖြန့်ကျဲချလုိုက်ပါတယ်၊ တံမြက်စည်းကိုလည်း လမ်းပေါ်မှာပဲ ပစ်ချထားလုိုက်ပါတယ်၊ ရှင်ရာဟုလာလေး အနားရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့...ရဟန်းတစ်ပါးက
* ငါ့ရှင် ဒီအမှိုက်တွေ ၊ တံမြက်စည်းတွေကို စည်းကမ်းမဲ့ မည်သူထားတာပါလဲ
* ဒီနားမှာတော့ ရှင်ရာဟုလာလေး သွားလာနေတာ မြင်တာပဲ ၊ သူများဖြစ်မလား မသိဘူး
ရဟန်းတော်တွေက ရှင်ရာဟုလာလေးလာတာကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြောကြတာပါ။ ဒါကုို ကြားတော့ ကိုရင်ကလေးက ဘာမှ မပြောပါဘူး၊ အမှိုက်တွေကို ကောက်သိမ်း၊ တံမြက်စည်း ကိုလည်း နေသားကျအောင်ထားလုို့ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်တွေ ပြီးသွားချိန်မှာတော့ ရဟန်းတော် များကို လက်အုပ်ကလေးချီပြီး လျှောက်ရှာပါတယ်...။
* အရှင်ဘုရားတုို့၊ တပည့်တ်ာရဲ့အပြစ်ကို သည်းခံတော်မူပါဘုရား၊ နောက်လည်း အမြင်မတော်ရင် ဆုံးမတော်မူပါ ဘုရားလုို့ ... လျှောက်ခဲ့ပါသေးတယ်...။
ကုိုရင်ရာဟုလာလေး ဘယ်လောက် လိမ္မာလုိုက်ပါသလဲ၊ ဘယ်လောက် မာနကင်းလုိုက်ပါသလဲ၊ ဘယ်လောက် ချစ်စရာ၊ ကြည်ညိုစရာကောင်းလုိုက်ပါသလဲ၊ စာရေးနေရင်းနဲ့တောင် စိတ်က မှန်းလုို့ကန်တော့မိပါတယ်...။
***သြော်...ဒါတွေဟာလည်း မြတ်စွာဘုရားရှင် နမူနာပြု ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ မှန်ကွဲစကလေးတစ်ခုရဲ့ ကျေးဇူးက စခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား....***
အားလုံးပဲ မာနကင်းလုို့ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
ဆက်ရန်... ***ရှင်ရာဟုလာနှင့် ဂဏန်းသင်္ချာ ဒေသနာ ***
ရွှေဘုန်း- ၁၃၇၅-ခု၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၃)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ (17. 10. 2013)